Gantaallo lagu weerarray Israa'iil iyo Weerarro Yuhuudda ku qaaday Marinka Gaza (Wararkii ugu danbeeyay..) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Gantaallo lagu weerarray Israa'iil iyo Weerarro Yuhuudda ku qaaday Marinka Gaza (Wararkii ugu danbeeyay..) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Gantaallo lagu weerarray Israa’iil iyo Weerarro Yuhuudda ku qaaday Marinka Gaza (Wararkii ugu danbeeyay..)
Xaaladda magaalada Qudus, marinka Gaza iyo degaanada Yuhuudda ayaa kasii dartay saacadihii ugu danbeeyay, kadib xadgudubkii ay ciidamada Yuhuudda kula kaceen dadka muslimiinta ah ee ku cibaadeysanaya Masjidka barakeysan ee Al-Aqsaa, Qudus.
Kooxaha reer Falastiin ee fadhigoodu yahay magaalada Gaza ayaa iyagoo ka jawaabaya xadgudubka ciidamada Yuhuudda ka wadaan Masjidka Al-Aqsaa ayey caawa bilaabeen inay gantaallo ku weerarraan magaalooyinka Israa’iil, waxaana tobanaan Gantaal lagu riday magaalooyinka ku dhow Marinka Gaza, waxaa kaloo gantaaluhu ku dhaceen Galbeedka Qudus.
Diyaaradaha dagaalka ayaa iyaguna weerarray Marinka Gaza, waxaana weli socda weerarrada labada dhinac, iyadoo marinka Gaza ay Yuhuudu ku dishay 9 qof oo ay ku jiraan saddex caruur ah, taliye ciidan.
Xaaladda ayaa weli kacsan waxaana socda weerarrada gantaallaha kooxaha Falastiin ku qaadayaan magaalooyinka Israa’iil iyo weerarrada duqeynta ah ee diyaaradaha dagaalka Yuhuudda.
Previous articleFarmaajo oo caqabad lama filaan ah hor dhigay dadaalkii Midowga Afrika ee dhexdhexaadinta Doorashada
Next articleWaare oo kashifay 3-da Wasiir ee xayiray dhaqaalihii Beesha Caalamka ugu talogashay fatahaaddda